Sida loogu badalo fiidiyowyada qaab WebM ah (oo loogu galiyo YouTube) | Laga soo bilaabo Linux
Sida loo beddelo fiidiyowyada qaab WebM ah (oo loogu galiyo YouTube)
Dhawr bilood ka hor waanu faraxnay goorma Google waxay go'aansatay inay sii deyso VP8 video codec oo abuuro, oo ay weheliyaan ururo kale oo badan, qaabka WebM (oo la xidhiidha VP8 + OGG Theora). Si kastaba ha noqotee, dad yar ayaa yaqaana sida loogu badalo fiidiyowyadooda qaabkan cusub oo tusaale ahaan loogu soo raro YouTube. Marka casharradan way ku anfacayaan haddaad ka mid tahay dadkaas.
Tallaabooyinka la raaco
1.- Waxaan furay VLC.
2.- Dhexdhexaad> Beddel… Ama kaliya Ctrl + R.
3.- Kudar oo xulo hal ama in kabadan (adoo adeegsanaya Ctrl + guji) fiidiyow si aad ubadasho.
4.- U rogo.
5.- Faylka aadaya> Daalaco. Xullo dariiqa aad rabto inaad ku kaydiso feylka una magacaw wax.webm.
Fiiro gaar ah: waxaad dooran kartaa Show xulashada wax soo saarka si aad u aragto fiidiyowga sida VLC u beddeleyso.
6.- Profile> Video - VP80 + Vorbis (WebM).
Haddii ay dhacdo inaad beddeleyso fiidiyowga is-dhexgalka ah, tusaale ahaan mid la duubay iyadoo la isticmaalayo kamarad fiidiyow ah oo leh xallinta 1080i halkii laga isticmaali lahaa 1080p, xulo xulashada Deinterlace. Haddii kale, gebi ahaanba iska indha ikhtiyaarkan.
Fiiro gaar ah: ikhtiyaarrada beddelidda horumarsan ayaa la heli karaa adiga oo gujinaya badhanka leh aaladda aaladda.
7.- Bilow. Nidaamka beddelaadku waa inuu bilaabmaa.
8. - Marka beddelaad la dhammeeyo, hubi in fiidiyowgu u muuqdo mid wanaagsan.
9.- Waa la qabtay Hada fiidiyowga waad gali kartaa YouTube-ka. 🙂
Fiiro gaar ah: Waxaan doortay VLC si aan ugu beddelo qaabka WebM, laakiin waxaad isticmaali kartaa qalab kale oo badan (dhammaan kuwa ku saleysan maktabadaha ffmpeg, tusaale ahaan).
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Isticmaal FileLet » Sida loo beddelo fiidiyowyada qaab WebM ah (oo loogu galiyo YouTube)
Alvaro Ortiz sawirka meeleynta dijo
Wanaagsan! Waxaan raadinayay wax sidaas oo kale ah muddo dheer. Waxaan sameyn doonaa tijaabooyin si aan u arko sida ay wax u socdaan. By habka, waxaad sidoo kale sharxi lahayd sida loo gudbiyo codka. Iyo waliba inaad u gudbiso sawirrada shabakadda.
Jawaab Alvaro Ortiz
Waxay umuuqataa mid aad ufiican, 92,6 Mb 15,7 Mb. Laakiin sida muuqata feyl (ayaa leh) wuxuu soconayaa 17 daqiiqo webm-na wuxuu dhigaa 28 daqiiqo.
waxbaa dhaca dijo
Waxaan ku soo geliyaa iyaga oo qaab webm ah, laakiin mar dambe, markii la soo geliyo youtube-ka, layaabkeennu wuxuu u beddelaa inay iftiimiyaan, waad ka eegi kartaa adigoo soo dejinaya fiidiyaha aad ku soo rartay fiilada Ant video downloader maxaa yeelay qalabka fiilada la siiyaa ma sii shaqeynayo
Ka jawaab waxbaa dhacaya
Haa, dabcan, waxay u badashaa inay dhalaalaan maxaa yeelay waxay ubaahantahay isticmaaleyaasha adeegsada flash-ka si ay u awoodaan inay daawadaan, laakiin fiidiyowyadan waxaa laga daawan karaa biraawsarrada aan lahayn qalabka fiilada dhejiska lagu rakibo, taasi waa farqiga u dhexeeya. Waxaad isku dayi kartaa inaad udhaqaajiso ciyaaryahanka html5 ee youtube-ka biraawsarkaaga sidaasna waxaad ku arki kartaa fiidiyowyadaada tikniyoolajiyadda html5http://www.youtube.com/html5), waa nooc tijaabo ah. Farxad
Ku jawaab Noltyn
Focuswriter: qor adiga oo aan ku mashquulin
VoIP-ka Linux: codsiyada ugufiican ee la heli karo